Global Voices teny Malagasy » Bangladesh : Herisetra Naharitra Herintaona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Janoary 2017 5:59 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika (fr) i Mélanie Wong, miora
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fahalalahàna miteny, Fampandrosoana, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Sasantsasany amin'ireo mpanoratra tsy mpino an'Andriamanitra, nisy namono tato anatin'ny taona vitsivitsy farany tao Bangladesh. Miankavia miankavanana ary avy any ambony no midina : Faisal Arefin Dipan, Shafiul Islam, Oyasiqur Rahman Babu, Rajib Haider, Avijit Roy ary Ananta Bijoy Das.
(Fampitandremana: sary maherihery setra no anatin'ny rohy ery ambanin'ny lahatsoratra) Tsy latsaky ny 15 ireo bilaogera, mpanoratra sy mpikatroka no maty nisy namono  tao Bangladesh noho ny hevitra liam-pivoarana nananan-dry zareo sy ny tsy finoany an'Andriamanitra, ary tao anatin'ny taona efatra monja io. Zavatra natrehan'ny firenena ihany koa ny fitomboana avo dia avon'ireo fanafihana mikendry ny vahiny sy ny mpino.
Tsy tongatonga ho azy io fihazakazaky ny famonoana olona kotrehina hamelezana ireo mpanoratra sy nahita fianarana io, izay fantatra noho ny fisainana liam-pivoarana ananany. Izay indrindra, saiky ho ny anaran'ireo olona rehetra maty nisy namono dia hita daholo mivoaka ao anatin'ny lisitra iray ahitàna olona 84 , noforonin'ireo miozolmana mpitarika fivavahana mpifikitra amin'ny nentin-drazana. Ampangain'ireto farany noho ny tsy finoany an'Andriamanitra sy ny fikatrohany manohitra ny finoana silamo amin'ny alàlan'ny lahatsoratra avoakany ireo biloagera. Natolotra ny kaomity iray manokana tao amin'ny governemanta io lisitra io tamin'ny 2013. Avy eo ireto mpitarika fivavahana ireto dia nilaza ampahibemaso hoe marobe ireo bilaogera no « mpanaraka hevitra diso » ary mendrika ny « hovonoina ».
Endri-pitondrana ‘demaokrasia parlemantera’ no misy ao Bangladesh, izay ny lalàm-panorenana  no miantoka ny zo sy ny fahalalahana maneho hevitra. Na izany aza, ny governemanta, ny rafi-pitsaràna ary ny mpitandro filaminana dia tsy manana ny fepetra  sahaza hisorohana io karazana fanambaràna mikendry ny bilaogera sy ny mpanao gazety io.
Izao no zavamisy, nobahanan'ireo manampahefana aza ireo tranonkala ao amin'ny aterineto heveriny ho mampididoza  ary bilagera marobe no nosamboriny  izay hita tao anatin'io lisitra mainty malaza io. Tamin'ny 2015, nanaraka indrindra ny nahafatesan'ilay bilaogera Niloy Neel, maty nokapaina kalaza  tao an-tranony, nampitandremin'ny lehiben'ny polisy ireo « mpisaina malalaka sy ireo bilaogera mba hitandrina tsy hihoatra ny fetra raha vao fanehoany ny fomba fijerin'izy ireo ny ara-pinoana no resahana ». Marobe ireo velon'ahiahy  manahy momba ny ezaka ataon'ny polisy momba ireo fanadihadiana mikasika ireny vono olona ireny.
Aleon'ireo bilaogera voasoratra ao anaty lisitra mainty mandeha manao sesitany ny tenany.
Manoloana ny toedraharaha tahaka izany, marobe ireo bilaogera sy mpikatroka an-tserasera no misafidy ny hialokaloka any ivelany. Ary tsy mora velively izany toejavatra izany, na ho azy ireo, na ho an'ny havany. Tany ampiandohan'ity taona ity, Mahmudul Haque Munshi, bilaogera sady mpikatroka an-tserasera, izay nahita fialofana any Alemaina, nanazava ny fanapahankeviny tao anatin'ny bilaoginy Swapnokothok  (Mpandrary nofy) :
Tsy nihevitra velively ny handao ny fireneko mihitsy aho… […] Voamarika tao anatin'io lisitra io ny laharan'ny findaiko, ary naharay fandrahonana ho faty marobe aho. Rehefa nanomboka nitanisa anaranà bilaogera tsy maintsy hovonoina, raha sanatria midaraboka ny fitondrana misy ankehitriny, ny sasany tamin'ireo tomponà bilaogy, ary nivoaka tao ny anarako, tsy dia noraharahaiko loatra. Tamin'izany fotoana izany, nijanona ho hevitra sarotra tanterahana sy mampihomehy izany hevitra hoe famonoana bilaogera izany. Saingy vetivety dia lasa tena izy ilay hevitra, ny 14 Febroary 2013 no marimarina kokoa, rehefa injay nisy namono tamin'ny kalaza ny bilaogera iray sy iray amin'ireo namako tena akaiky ahy, Thaba Baba (Ahmed Razib Haider ), teo anoloan'ny tranony.
Mahatsiaro ho meloka aho. Nitarika tolona iray aho. Ary tsapako ho toy ny hoe namela ho irery ny hafa, sy nandao ny tany fiadiana. Fa ady inona tokoa aloha ilay ady andraisantsika anjara e ? Ahoana no hiadiana aminà aloka ? […] Ho an'ireo izay mikatsaka ny hanàla ny aiko, izao no tiako hambara amin'izy ireo: tsy nandresy ianareo. Mbola miaina aho, ary mbola betsaka ny zavatra tsy maintsy vitaiko. Tsy hidaraboka alohan'ny hahatanterahako ny iray amin'ireo tanjoko aho.
Tamin'ny 2016, nitohy ireo famonoana. maty nisy namono  tamin'ny Aprily i Nazimuddin Samad, mpianatra momba ny lalàna tao amin'ny anjerimanontolon'i Jagannath ary feo mpitsikera ny fanaovana an-tendrony ara-pivavahana. Toy izany koa i Rezaul Karim Siddique, mpampianatra teny anglisy tao amin'ny anjerimanontolo Rajshahi, izay hita tsy lavitry ny trano fonenany, maty nisy namono tamin'ny kalaza .
Xulhaz Mannan, toniandahatsoratry ny tranonkala voalohany mpanome vaovao momba ireo LGBT ao Bangladesh. Sary natolotry ny PEN International.
Xulhaz Mannan, mpikatroka LGBT  sy Mahbub Rabbi Tonoy, mpilalao an-tsehatra no sady mpikatroka mafàna fo, samy maty nisy namono ny  25 aprily 2016. Xulhaz Mannan no mpanorina ilay tranonkala voalohany natokana ho an'ireo olom-pirenena LGBT ao Bangladesh .
— Tasneem Khalil (@tasneem) 26 Apr 2016 
Ny Ansar al Islam #Bangladesh /AQIS no milaza ho tomponandraikitra tamin'ny famonoana an'i Xulhaz Mannan sy Mahbub Tanoy.
Maro no nisy nilaza ho tompon'antoka tamin'ireny famonoana ireny tao amin'ny aterineto na tany anaty media sosialy  tamin'ny alàlan'ny kaonty izay eritreretina ho an'ny EI , ny Ansar al-Islam  na koa ny Ansarullah Bangla Team . Nilaza ihany koa ireo vondrona ireo fa tompon'antoka tamin'ireo famonoana an-jambany natao tamin'olontsotra.
Fanafihana namelezana ny trano fisakafoana Holey Artisan Bakery
Ny alin'ny 1 Jolay 2016, lehilahy dimy tokony ho roapolo taona eo, nandranto fianarana tany ivelany ary avy aminà fianakaviana manan-katao, no niditra tampoka tao amin'ny Holey Artisan Bakery , trano fisakafoana manana ny maha-izy azy ao Dacca ao Bangladesh ary vahiny no tena be mpandeha ao aminy. Olona ampolony no nataony takalonaina, vahiny sy Bangla, avy eo nitifitra polisy ireto mpanafika.
Ny ampitso maraina, nanao bemidina nanafika ny Holey Artisan Bakery  ireo mpitandro filaminana Bangla, na ny marimarina kokoa ny vondrona ivelan'ny tafika ao anatin'ny polisy mpiambina sisintany, ny polisy ary ny hery manokana “Rapid Action Battalion”, namaranana ilay fakàna takalonaina. Ny farany, avotra ny sasany ary ny hafa afaka nandositra, saingy nisy olona 29 maty, ka 20 tamin'ireo dia avy amin'ireo takalonaina (18 vahiny ary 2 Bangla), polisy roa, mpitily dimy ary roa mpiasa tao amin'ilay trano fisakafoana. Io no fanafihana ratsy indrindra niainan'i Bangladesh hatreto.
Ny masoivohom-baovao, Amaq, rantsana fampielezankevitry ny EI, no nitonona ho tompon'antoka tamin'ilay vono olona. Nisy sarin'ireo mpampihorohoro manasongadina ny keffieh menan'ny EI sy soratra mainty amin'ny fiteny penjabi, ary sary tamin'ilay vono olona nanjo ireo takalonaina nalefa nozaraina tamin'ny aterineto.
Ny 7 Jolay, notafihan ‘ny mpampihorohoro ireo mpitandro filaminana nalefa hijery akaiky ny famoriambahoaka tao Aïd tao Sholakia izay nahavory olona marobe. 3 no matin'izy ireo. Taty aoriana kely, io volana io ihany, notafihan'ny polisy ny vondrona mpampihorohoro tao Dacca renivohitra, 9 ireo mpampihorohoro no maty.  Nambaran'ny polisy fa nahita baomba ry zareo, bala, ary saina mainty roa an'ny EI.
Ankoatra ireo mpikambana amin'ny EI, manamafy  ny polisy fa nisy ihany koa mpikambana avy amin'ny Jamaat-ul-Mujahideen, fikambanana islamista ao Bangladesh.
Navoakan'ny mpitandro filaminana ny lisitra iray nisy ireo olona 200 eo ho eo karohana  nandritry ny 18 volana, ary heverina ho lozabe. Ny vaovao farany dia milaza fa nandray fiaramanidina lasa nankany Malezia sy Tiorkia ny sasany, tsy nasiana fanamarihana misimisy kokoa momba izay tohin'ny dian-dry zareo.
Ny volana vitsy taorian'izay, tao anatin'ny hetsika hisorohana fanafihana hafa, nanao bemidina tany an-tranon'ireo olona noahiahiana ho mpanao asa fampihorohoroana ny polisy. Araka ny vaovao azo farany , Tamim Ahmed Chowdhury (antsoina hoe Abū Ibrāhīm al-Hanīf), manana zom-pirenena roa, kanadiana sy Bangla, no nitantana ny fanafihana tamin'ny 1 Jolay ; nahatonga azy nahazo ny fanakasitrahana rehetra avy amin'ny EI . Ny 26 Septambra 2016, lavon'ny polisy i Tamim Ahmed Chowdhury. Ny 24 Desambra 2016, nanao bemidina nanafika indray mandeha indray ny polisy , izay nahafahana nisambotra maromaro tamin'ireo mpampihorohoro; maty ny roa noho ny nanapoahany ny akanjo feno vanja teny aminy.
— Norrfika (@norrfika) 3 Dec, 2016 
Fitohitohizan'ireo asa fampihorohoroana tao Bangladesh
Nitsahatra aloha hatreo ny fandatsahan-drà nanjo ireo tsy manantsiny, saingy miasa any an-katakonana any ireo mpampihorohoro, tsy lavitra velively ny loza. Volana maro taorian'ilay fanafihana tao amin'ny kianja Gulshan-e-Iqbal, mbola foana tsy misy olona hatrany ireo trano fisakafoana ao Dacca, ary nofoanan'ny ankamaroan'ireo vahiny mpizahatany ny diany ho any Bangladesh, na teo aza ny fanamafisana ny fepetram-piarovana. Ho an'i Bangladesh taona iray voamarika tamin'ny vy mahamay midorehitra  ny taona 2016, iza no mahalala izay mbola ho avoaky ny ampitso…
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/18/94096/
 bilaogera, mpanoratra sy mpikatroka no maty nisy namono: https://globalvoices.org/specialcoverage/bloggers-under-fire-the-fatal-consequences-of-free-thinking-in-bangladesh/
 lisitra iray ahitàna olona 84: http://bdnews24.com/bangladesh/2013/03/31/atheist-bloggers-to-repent
 « mpanaraka hevitra diso : http://www.kaagoj.com/details?id=188
 nobahanan'ireo manampahefana aza ireo tranonkala ao amin'ny aterineto heveriny ho mampididoza: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2013/04/01/bangladesh-authorities-go-after-anti-muslim-bloggers/
 bilagera marobe no nosamboriny: https://fr.globalvoices.org/2013/04/02/142855/
 Niloy Neel, maty nokapaina kalaza: https://fr.globalvoices.org/2015/08/08/189110/
 Ahmed Razib Haider: https://fr.globalvoices.org/2013/02/24/138909/
 maty nisy namono: https://globalvoices.org/2016/04/07/secular-activist-targeted-and-killed-in-bangladesh/
 maty nisy namono tamin'ny kalaza: https://globalvoices.org/2016/04/25/a-university-professor-is-hacked-to-death-another-victim-of-deadly-intolerance-in-bangladesh/
 Xulhaz Mannan, mpikatroka LGBT: https://globalvoices.org/2016/04/26/xulhaz-mannan-an-lgbt-activist-in-bangladesh-is-the-latest-victim-in-a-string-of-brutal-killings/
 tranonkala voalohany natokana ho an'ireo olom-pirenena LGBT ao Bangladesh: https://fr.globalvoices.org/2014/01/28/160887/
 26 Apr 2016: https://twitter.com/tasneem/status/724882968364376064
 aterineto na tany anaty media sosialy: http://abcnews.go.com/International/wireStory/key-radical-islamist-groups-bangladesh-38673215
 Ansar al-Islam: http://www.aljazeera.com/news/2016/04/ansar-al-islam-claims-bangladesh-student-killing-160409065049180.html
 niditra tampoka tao amin'ny Holey Artisan Bakery: https://en.wikipedia.org/wiki/July_2016_Dhaka_attack
 nanafika ny Holey Artisan Bakery: https://globalvoices.org/2016/07/02/twenty-hostages-killed-and-thirteen-rescued-as-dhaka-hostage-siege-ends-in-tragedy/
 9 ireo mpampihorohoro no maty.: http://www.thedailystar.net/city/9-militants-killed-joint-drive-kalyanpur-1259647
 lisitra iray nisy ireo olona 200 eo ho eo karohana: https://www.facebook.com/rabonlinemediacell/posts/1709645139252751
 Araka ny vaovao azo farany: http://www.thedailystar.net/city/dhaka-attack-planner-named-bounty-declared-1263331
 Tamim Ahmed Chowdhury : https://en.wikipedia.org/wiki/Tamim_Chowdhury
 nahazo ny fanakasitrahana rehetra avy amin'ny EI: http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/new-evidence-shows-deep-islamic-state-role-in-bangladesh-massacr/3332736.html
 nanao bemidina nanafika indray mandeha indray ny polisy: https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2016/12/24/live-cttc-raids-militant-den-dhaka/
 3 Dec, 2016: https://twitter.com/norrfika/status/805065107986333696
 taona iray voamarika tamin'ny vy mahamay midorehitra: http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2016/12/25/end-of-the-beginning/